Xaaladaha Bina-aadamnimada waa in laga abuuraa Isgoyska Soobe ee Kapıkule | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara22 EdirneXaaladaha Bani-aadamnimada waa in laga abuuro albaabka Xuduudda Kapıkule
19 / 04 / 2018 22 Edirne, GUUD, WADADA, TURKEY
Kapitan Andreevo xadka ee furitaanka Turkey Yurub; Safarada TIR ee soo koraya sanado badan. Dhanka kale, qorshaha wasiirada, wadahadal lala yeeshay Bulgaariya, ayaa ka shaqeynaya sidii loo yareyn lahaa geeddi-socodka hawlaha kala duwan ee wadamada ka socda, halka dhinaca kale xaaladaha ku noolaanshaha safka TIR-kooda sii wadaan inay ku riixaan xuduudaha dadka.
hoggaamineed Turkey ayaa dhoofisa waxyaabaha ay magaalooyinka kala duwan ee Yurub in darawalladu baabuur dalka ay ku rakibi awood kar furay Bulgaria Edirne mararka saacadood ama xitaa maalmood sugayeen. Inta lagu guda jiro hawshan, xaaladda darawaliinta ee ku adagtahay in ay la kulmaan baahidooda bini'aadamka sida cunista, hurdada ama xitaa musqusha musqusha sababtoo ah xaaladaha degaanka ayaa looga dooday kooxda UTIKAD ee Wadashaqeynta Wadooyinka dhawaan.
UTİKAD, Ururka Iskaashatada Adeega Gaadiidka iyo Soogalootiga ee Caalamiga ah, ayaa dedejiyey shaqadeeda safafka ka jira Kapıkule Xudduudaha, oo ah mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee ka jira waaxda saadka. Shirkii Kooxda Wadooyinka ee lagu qabtey Maarso, sababaha safafka ee Kapıkule Xudduudaha ayaa looga dooday. Iyada oo la eegayo macluumaadka dhamaystiran oo ay bixiyeen darawallada TIR iyo sawirada ay soo saareen xubnaha Kooxda Shaqada si ay si wanaagsan u muujiyaan habka loo marayo; Marka laga soo tago sababaha safka loo sameeyay, xaqiiqo aad u muhiim ah ayaa mar kale la shaaciyey. Darawaliinta TIR waa inay sugaan saacado iyo maalmo xitaa safafka laga sameeyay Kapikule oo ay gaareen 35 illaa waqti ka waqti. Inta lagu jiro muddadan dheer iyo daal badan, darawalada aan seexan karin ama cuni karin xitaa ma dabooli karaan baahida musqusha taasoo ah mid ka mid ah baahida ugu ba'an.
Mr. Ekin Tırman, oo xubin ka ah Guddiga Sare ee UTİKAD iyo Gudoomiyaha Kooxda Wadada Shaqada, ayaa ka hadlay aragtidiisa ku saabsan dhibaatadan aan la xalinin sanado badan. "Awood kar dhinaca jirka ah ee Turkey ayaa la kulma dhibaatooyin systemic ee dhinaca Bulgarian. Labadaasi waxay saameyn taban ku yeesheen qaybta. Si kastaba ha ahaatee, qeybta ugu muhiimsan ee arrintani waa in xawaaladeena 50 ee gaadiidka caalamiga ah ka dhigaya in ay ka shaqeeyaan nidaam kaas oo lagu adkeynayo xaaladaha bina aadanka. "
Guddoomiyaha Kooxda Wadooyinka Wadada UTIKAD Mr. Tirman wuxuu soo koobay habka soo socda: Wakhtiyada sugitaanka ee ka yimaada baarkinka baarkinka Turkiga ee nawaaxiga ayaa aad u dheer, iyo dhinaca Bulgaariya, xidhitaanka nidaamka waqti ka waqti waxay keenaysaa agglomeration. Shirkadda Kapikule ee wadada u dhaxaysa 15-35 km, iyo marka ay timaado Kapıkule, goobta baabuurta la dhigto, waqtiga sugitaanka booliska iyo habka diiwaangelinta waxaa lagu ogaaday saacadaha 12. Dhinaca Turkiga waxaa jira kaliya booliska 3 iyo dhibcaha diiwaangelinta 3. Natiijada arintaan, dabiiciga, baabuurtu waxay kaliya ku dhaafi kartaa Kapikule talaadada. Darawaliinta TIR waxaa lagu qasbay in ay wadaan dhammaan nidaamka gawaaridooda. Kama tagi karaan gawaaridooda oo seexdaan. Meelo laguma hayo agagaarka goobta ay ka heli karaan baahida bani'aadamnimada sida musqulaha iyo cuntada. Dhinaca Turkiga, bilayska iyo gaadiidka maraya marxaladda diiwaangelinta, waqtigan, 6'li naaftadu waxay ku dhacdaa safka. Ka dib markii celceliska iibka shidaalka naaftada ah saacadaha 7, baabuurtu waxay dhex maraan aagagga buunbuunada oo isku xigta oo galaya aagga dhaqanka Bulgaariya. Kantaroolka booliiska ee 6 ee ku yaala kooxda Boliiska ayaa inta badan saf u galaya sababo la xidhiidha fashilaadda nidaamka ama cusbooneysiinta. "
In Turkey, oo hoosta ka xariiqaya in ay jiraan qiyaastii 50 kun darawalada waday fuuli xamuul caalamiga ah; "TIR gaari waa shaqo adag. Dadkani waxay horeyba uga maqan yihiin qoysaskooda maalmo, mararka qaarkood toddobaadyo. Waxa uu isku deyayaa in uu xirfadiisa ku sameeyo shuruudo adag. Xaaladahan ma saameyn karaan kaliya darawaliinta 50, laakiin waxay sidoo kale saameyn ku yeelanayaan beel weyn oo ku dhow 250-300. Waa lagama maarmaan in dadkani ay qaadaan talaabooyinka lagama maarmaanka u ah noloshooda si sahlan oo loo hubiyo in ay jidh ahaan iyo ruux ahaanba caafimaad qabaan isla markaana u dhaqmaan sida ugu dhakhsaha badan. " Haddii aan tallaabadan la qaadin, daboolladu waxay sii wadi doonaan inay kordhaan sanadaha soo socda. Sannadaha soo socda, waxaan ku adkeyn doonnaa helitaanka darawaliinta si aan u soo dirno alaabada la dhoofiyo dibadda waddo. Sidaa daraadeed, arinkani waa inuu ahaado ajandaha kaliya ee NGO-yada ee qaybta sahayda, laakiin sidoo kale ururada kale ee xirfadlayaasha ah. Xaaladaha bani'aadamnimada waa in lagu abuuraa albaabada xuduudda
Abuuridda monopoly ka soo bir birta
Mashruuca Saldhiga Söke Mucjiso
Dhismaha tareenka xadiidka xawaaraha sare ee Sivas ee dibedda magaalada waa dhibaato
UTİKAD Kooxda Wadooyinka Wadooyinka
Shahaadada Shahaadada ee MOTAŞ